“Ankehitriny efa mizotra mankany amin’ny fandriampahalemana izahay eto Colombia, ka tena zava-dehibe ao anatin’izany ny feon’ny vehivavy” · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraGunawin Oscar Chaparro
Voadika ny 08 Jona 2018 5:25 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, English, русский, English
Gunawin Oscar Chaparro dia mpikambana ao amin'ny Vahoaka Arhuaco, izay nanompoany ho sekretera ao Nabusimake, renivohitry ny vondrom-piarahamonina Arhuaco. Mpianatra efa nahazo diplaoma tao amin'ny Universidad del Rosario ihany koa izy ary tanora mpitarika amin'ny resaka politikam-bahoaka. Ny manaraka etoana dia dika an-tsoratry ny famakafakan'i Gunawin Oscar amin'ny zavontenin'ny voambolana “Arhuaco“.
Teny mibahan-toerana avy amin'ny lahatsoratra miisa 116 nivoaka tanelanelan'ny Janoary 2017 sy Aprily 2018 hita nanonona ny “Arhuaco” (fokonolona tompotany ao Colombia) tao anatin'ny angona Media Cloud miisa dimy avy ao amin'ny sehatra famoaham-baovao miteny espaniola Kolombiana. (jereo lehibe kokoa ny sary)
Mifandray amin'ity zavonteny ity, tiako ny milaza fa toa mirona mankany amin'ny ivelambelany loatra ireo torohay nangonin'ny seha-mpamoaham-baovao isakanarazany momba ny vondrom-piarahamonina tompotany isan-karazany.
Ny famotopotorana momba ny vahoaka tompotany mila mandeha mihoatra ny endrika hita sy bika, ary hahatratra ambaratonga lalina kokoa miresaka ny fampiasana sy ny dikan'ny singa tsirairay.
Lohahevitra hafa (tiako ho hita misongadina) ny fandraisana anjaran'ny vehivavy tompotany. Koa ankehitriny rehefa miroso mankany amin'ny fandriampahalemana isika eto Colombia, ka tena zava-dehibe ho amin'izany ny feon'ny vehivavy.
Raha ny momba ahy ihany koa dia itazanana ny fanohanana ara-pihetseham-po amin'ny asa ataonay ny vehivavy, ary tiako ny mahita azy ireo sy ny lohahevitra hafa hisongadina ao amin'ireo zavonteny ireo.
Ireto avy ny sasany amin'ireo lohahevitra hafa tiako hisongadina: zo hanan-tany, zo hanao asa ara-panahy, fizakan-tena, rariny (fitsarana) tompotany, izay lohahevitra mbola tsy nankatoavin'ny Fanjakana aloha hatramin'izao.
Tiako ihany koa ny vahoaka tompotany ho manampahefana ara-tontolo iainana, ary ho ankatoavina ny zon-dry zareo hanitatra ny zaratany izay itoeran'ny tahirin-javamananaina tompotany.
Lohahevitra hafa tena zava-dehibe ny zaratany sy ny tetikasam-pitrandrahana izay atrehin'ny vahoaka arhuacos sy ireo vondrom-piarahamonina hafa.
Voambolana tahaka ny ahoana no tokony ho hita miaraka amin'ny zavonteny Vahoaka Arhuaco?
Fandraisana anjara ara-politika
Fandraisana anjaran'ny vehivavy tompotany
Zo hanana zaratany
Zo hanao asa ara-panahy
Rariny ho an'ny tena
Fahefana ara-tontolo iainana
Zo hanitatra tany
Fanambaràna ny zaratany ho tsy mila tetikasam-pitrandrahana harena ankibon'ny tany
Ao anatin'ny andiany Rising Frames izay niarahana narafitra tamin'i Mónica Bonilla, izay nanomana sy nanamora ny atrikasa notontosaina tamin'ny 18 mey 2018 tao amin'ny Center of Internet and Society tao amin'ny Del Rosario University -ISUR- tao Bogotá, Colombia ary namory solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa ao amin'ny vondrom-piarahamonina tompotany Arhuaco sy Wayuu handray anjara amin'ny asam-pahaiza-mitantara nomerika ity.
Nanatrika tamin'ny fandikana an-tsoratra sy ny fandikan-teny, izay nahitsy hazava kokoa sy ho fohy kokoa i Mónica Bonilla sy i Belén Febres-Cordero.